Shirkada GOLIS Telecom oo Si wayn ay Ugu Mahad Naqeen Bulshada Gobolka Sool & Shahaado Sharaf Video+Sawirro | Kalshaale
Shirkada GOLIS Telecom oo Si wayn ay Ugu Mahad Naqeen Bulshada Gobolka Sool & Shahaado Sharaf Video+Sawirro
Mar 24, 2018 - 1 Aragtiyood
Laascaanod (Kalshaale) Shirkada Isgaadhsiinta ee GOLIS laanteeda gobolka Sool ayaa waxaa ay ka mid ahayd shirkadaha ka qayb qaatay xilliyadii adkayd ee abaaraha sanadkii tegay door muhiim ah ka qaatay . Shirkadan ayaa dadwaynaha gobolka Sool ay si wayn uga maahd naqeen tallaabadii ay qaaday xilligaasi ,
Waxaana ay bulshadu sidoo kale uga mahad naqday sidii ay Shirkadu u samaysay maal gelin ballaadhan oo isugu jirta dhismayaal , dhalinyaro loo sameeyo ganacsiyo yar yar iyo kuwo waawayn ka qayb qaadashada horumarinta dhanka Waxbarashada , wacyi gelinta nabadgelyada iyo waliba sidoo kale in ay ka taageerto dad dan yar ah baahiyaha.
Dhinaca kale Shirkadan ayaa sanadkii hore ka hirgelisay magaalada Laascaanood mid ka mida dhismayaasha ugu quuxda badan ee gobolka Sool , kaasoo ku baxday lacag ka badan 200,000 $ oo dollar. Dhawaan ayey ahayd markii ay Shirkada Golis la gudoonsiiyey shahaado Sharaf lagu maamuusayo Shirkadan , waxaana Shahaado Sharaftaasi gudoonsiiyey Maamulka gobolka Sool oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Sool .
Ugu danbayntii, Shirkada GOLIS ayaa waxay dar dar gelisay Maal gelinta ganacsiyada dadka danyarta , Dhalinyarada Jaamacadaha dhameeyey iyo waliba sidoo kale ganacsatada gobolka .
shirkadan waxa iskaleh dad xor ah o weligood wax
lahaanjiray waxana so maamuli jiray maaha
jabhad hader rabta inay taariikh bilaabato kkkkkkkkkkkkk